Indlu Yokhokho | Imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini - I-Airbnb
Indlu Yokhokho | Imizuzu eyi-10 uhamba ngezinyawo ukusuka ogwini
I-iyunithi yokuqasha ephelele ibungazwe ngu-Emanuel
U-Emanuel Ungumbungazi ovelele
Itholakala endaweni yendabuko yasePeniche de Cima, leli yifulethi elithokomele, elisanda kulungiswa futhi elichayeka entshonalanga neLanga. Itholakala imizuzu eyi-10 ukuhamba ukusuka emabhishi, eduze kakhulu namaketanga ezitolo ezinkulu kanye nenkaba yedolobha.
Sizobe silinde ukuvakasha kwakho!
Leli fulethi elithokomele lisendaweni yendabuko, futhi lisanda kulungiswa. Iseduze nesitolo esikhulu kanye nenkaba yedolobha, nje uhambo lwemizuzu eyi-10 ukusuka ogwini.
Leli fulethi lifakwe zonke izinsiza ozidingayo ngesikhathi sakho seholide, njengezinto zikagesi (okuhlanganisa umshini wokuwasha), i-wi-fi ne-cable TV. Siphinde sihlinzeke ngezitsha, ilineni lombhede namathawula okugeza, kanye nejeli yeshawa nejeli yesandla. Sigqamisa indawo evamile yegumbi lokuhlala/ikhishi, ekahle ukukhuthaza ukuphilisana phakathi kwezivakashi.
Leli fulethi lifakwe umshini wokuwasha, ukufinyelela kwe-wi-fi kanye ne-cable TV (eneziteshi ze-TV eziningi ezikhuluma isiNgisi nezangaphandle). Siphinde sihlinzeke ngezinto zetafula, amashidi ombhede namathawula okugeza, kanye nejeli yeshawa nensipho. Ikhishi negumbi lokuphumula babelana ngendawo evamile, elungele ukuzijabulisa.
4.69 · 70 okushiwo abanye
Iyindawo yakudala yasePeniche, eseduze kakhulu nezitolo zendawo, amabhishi, ezokuthutha kanye nezikhumbuzo ezinkulu. Sigqamisa ibanga elifushane ukuya olwandle, lapho ungajabulela khona izindawo ezinhle.
Siyatholakala kubavakashi bethu noma nini lapho kudingeka.
UEmanuel Ungumbungazi ovelele
Inombolo yepholisi: 77286/AL